Resaky ny mpitsimpona akotry : toy ny any amin’ny lalao an-dapihazo, misokatra ny ridao | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : toy ny any amin’ny lalao an-dapihazo, misokatra ny ridao
Indreo izy telo mirahalahy heverina na mihevitra ny tenany ho mavesa-danja no efa an-tsehatra vonona hibahan-toerana. Ny tandapan’ny Filoha am-perinasa mielim-patrana mitety ny Nosy manararaotra amin’ny fitokanana izay kely vita, hanaovana fampielezan-kevitra an-kolaka, handokandokafana ny tompon’andraikitra an-tampony. Tsy ampy anefa izany hanakonana ny adidy tsy efa. Misavovona tokoa moa ny asa maika tsy nisy fikarakarana. Tsy mahagaga noho izany raha mahatsiaro mihatototry ny fahasahiranana mitombo isan’andro ny vahoaka. Ny fahasorenana noho ny mangidy sy mangirifiry zakaina mandava-taona anefa no mety handresy lahatra amin’ny bitsibitsika ao an-tsain’ny mpifidy rehefa ao amin’ny efitra miafina ka hanondro ao anaty bileta ny anaran’izay ametrahany fitokisana. Mbola lavitra anefa izany. Roa taona latsaka roa volana. Mbola tsy any ny sain’
ny mponina. Ny maro dia mbola lany hery amin’ny fitadiavana anio dia anio izay afaka hatokona ao ambilany isak’izay mahandro. Asa izay mahamaimaika an-drizalahy. Samy efa namoritra tanan’akanjo moa na Ingahy Marc Ravalomanana na Andriamatoa Andry Rajoelina. Samy nanambara ny fanapahan-keviny hirotsaka amin’ny fifidianana. Samy nampitandrina izay manana tetika ho fanilihana azy tsy handray anjara toy ny tamin’ny 2013. Akon-dakolosy samy hafa no mitovy faneno mitatitra ny fisian’izany tetika izany. Eo koa manamafy ny ahiahy momba io ireo kabary tsy loa-body mandresy lahatra mikasika ny mety fitrangan’ny karatra mena fandrarana ny firotsahana an-tsehatr’izay voatondro ho manana farasisa.
Na atao aza fa tsy manana zo hitsara momba izany ny olon-tsotra toy ahy sy ianao, samy olom-pirenena ihany ka tompom-pahalalahana haneho ny ahiahy mikasika ny korontana miandry ny vahoaka raha izany no miseho.
Diso fiheverana koa anefa izy telo mavesatra ireo raha mino fa ny iray aminy ihany no mety ho mpandresy. Na tsy tonga aza ny fiovana izay samy nampanantenain’izy ireo, dia eran-tany niova ny rivotra mitsoka ary matetika mivadika tadio mifaoka an’ireo velon-toky nanantena tombon-dàlana noho ny fahalalany ny toerana sy ny fikafika ahatongavana amin’izany. Mazàna tato ho ato, mpifanina tsy nampoizina no nandrombaka ny fahatokisan’ny mpifidy.